Rocket League yakagadziridzwa | Linux Vakapindwa muropa
Rocket League Iri izita remusoro ratakatotaura nezvaro mune ino blog kakawanda, saka, kana iwe ukatevera LxA unenge watoziva nezvazvo. Zvisinei, iwe pamwe wakambotaura nezve uyu mutambo wevhidhiyo zvisati zvaitika, nekuti wakabudirira kwazvo uye wakaiswa mumazita emitambo yakanakisa yemavhidhiyo yeGNU / Linux pakati pezvakanakisa, kunyangwe iri nyore mune zvimwe zvinhu. Asi sekuziva kwedu, inyaya yekuravira, uye dzimwe nguva mitambo inogona kunge isingaite senge hombe dhiri inova chiitiko chinoshamisa.
Zvakanaka, kana iwe uchitova mumwe wavo akapindwa muropa kana kana iwe uchironga kuiisa munguva pfupi, iwe unofanirwa kuziva kuti yasvika mutsva mutsva zvakare kune yedu chikuva. Rocket League inovandudzwa nekuda kwebasa rePyyonix Inc., nedzimwe nhau dzakakosha dzauri chokwadi kufarira. Nenzira, kana iwe uchiri usina zita iri uye uchifarira, unazvo zviripo zvese muValve Steam chitoro uye zvakare muGOG (mune iyi 50% dhisikaundi izvozvi). Imwe yemabhuku makuru atakaona kuRocket League kubvira muna Zvita 10 ndeyechipiri Rocket kupfuura iripo kusvika Kurume 18, 2019. Kune zvekare shanduko mukufambira mberi, kunyange hazvo dzisina kunyanya kukura, asi dzakanaka. Kubva ikozvino zvichienda mberi, pese paunobata bhora unogona kuwana mapoinzi maviri (akaganhurirwa ku1 pasekondi), bhonasi yekuhwina yakave yakapetwa kaviri kubva pamakumi mashanu kusvika zana, uye svondo nyowani yakakwira uye zvimwe shanduko zvakaiswa maererano nenhamba yekukunda (50 kusvika 100).
Kuziva zvimwe nezve mutambo wevhidhiyo, unogona kuenda kuzvitoro zvandataura kana kuenda zvakananga ku zviri pamutemo webhusaiti yemusoro uyu. Uye chengeta ziso pane Steam, GOG uye Kuzvininipisa, nekuti ivo zvirokwazvo vane zvidzikiso pane akati wandei emitambo yavo yemavhidhiyo inotengeswa ino yeKisimusi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Rocket League yakagadziridzwa